Izizathu Ezivamile Zenza Ukuhwebelana OST File Orphaned
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Exchange Recovery Izizathu Ezivamile Zenza Ukuhwebelana OST File Orphaned
Izizathu Ezivamile Zenza I-Microsoft Exchange OST File Orphaned
Ifolda ye-Exchange offline (.ostIfayela liyikhophi lasekhaya nelingaxhunyiwe ku-inthanethi lebhokisi leposi kuseva ye-Exchange. Noma nini lapho ibhokisi leposi kuseva lingatholakali unomphela, i- OST Ifayela libizwa ngokuthi liyizintandane.
Kunezizathu eziningi ezizokwenza ukuthi i- Shintshanisa ifolda engaxhunyiwe ku-inthanethi (.ostifayela intandane. Sizihlukanisa ngezigaba ezimbili, okungukuthi, izizathu zehardware nezizathu zesoftware.
Noma nini lapho i-hardware yakho yehluleka ukugcina noma ukudlulisa imininingwane yolwazi lwakho lwe-Exchange Server (.edb), kwenzeka inhlekelele yedatha futhi iseva izoshayeka. Ngaleso sikhathi, OST amafayela azoba yizintandane. Kunezinhlobo ezintathu ikakhulukazi:
Ukwehluleka Kwedivayisi Yokugcina Idatha. Isibonelo, uma i-hard disk yakho inemikhakha ethile emibi nemininingwane yakho ye-Exchange Server igcinwa kule mikhakha. Lapho-ke mhlawumbe ungafunda kuphela ingxenye yefayela ledatha. Noma idatha oyifundayo ayilungile futhi igcwele amaphutha. Ukonakala okunjalo kwedatha kuzokwenza ukuthi i-database ingatholakali futhi yakho OST ifayela liyizintandane.
Ukwehluleka Kwamandla noma Iseva Yokuvala Ngokungajwayelekile. Uma kwenzeka ukwehluleka kwamandla noma uvala i-Exchange server ngokungafanele lapho iseva ye-Exchange ifinyelela kulwazi, lokho kungadala ukuthi imininingwane yakho ilimale futhi OST ifayela liyizintandane.
Ukungasebenzi Kwekhadi Lokulawula noma Ukwehluleka. Uma isilawuli senqolobane sisetshenziswa ne-Exchange Server, ukungasebenzi kahle kwaso noma ukwehluleka kwayo kuzodala yonke idatha efakwe kunqolobane lost kanye nenkohlakalo egciniwe, ukuze kwenziwe OST ifayela liyizintandane.
Kunamasu amaningi wokuvimbela noma ukunciphisa inkohlakalo yedatha ye-Exchange Server kanye ne OST ifayela eliyintandane ngenxa yezinkinga zehadiwe, ngokwesibonelo, i-UPS inganciphisa izinkinga zokwehluleka kwamandla, futhi ukusebenzisa amadivayisi wehadiwe anokwethenjelwa kunganciphisa namathuba okonakala kwedatha.
Futhi Shintshanisa OST ifayela lingaba izintandane ngenxa yezinkinga ezihlobene nesoftware.
Susa, Khubaza, noma Nqabela Ukufinyelela Kwebhokisi Leposi ku-Exchange Server. Uma ibhokisi leposi ku-Exchange Server elihambelana ne- OST ifayela lisuswa noma likhutshazwe ngumlawuli wakho weseva, noma ukufinyelela kwakho ebhokisini lemeyili kuyaphika. bese kuba eyakini OST ifayela liyizintandane futhi kufanele uthembele kulo DataNumen Exchange Recovery ukuthola okuqukethwe ebhokisini lakho leposi.
Igciwane noma enye i-Software enobungozi. Amagciwane amaningi azothelela futhi alimaze imininingwane yolwazi ye-Exchange Server futhi ayenze ingasebenziseki, okuzophinde kwenze i- OST ifayela liyizintandane. Kunconywa kakhulu ukufaka isoftware esezingeni eliphakeme yokulwa negciwane kusistimu yakho ye-Exchange Server.
Ukusebenza Okungafanele Komuntu. Ukusebenza kabi kwabantu, njengokususa imininingwane yolwazi ngephutha, ukwahlukanisa kabi idivayisi yesitoreji, ukufomatha kabi uhlelo lokusebenza, konke kuzokwenza ukuthi i-Exchange Server database ingatholakali, bese yenza OST ifayela liyizintandane.
Lungisa izintandane OST Amafayela:
Lapho yakho OST amafayela ayizintandane, usengawusebenzisa umkhiqizo wethu owine imiklomelo DataNumen Exchange Recovery kuya thola imininingwane ku-Exchange yakho eyintandane OST amafayela, ukuze ubuyise okuqukethwe ebhokisini lakho leposi futhi.